‘हिरोइन’ पाएपछि किन गर्नु फुपूको रोल ?
फिल्मको खडेरी लाग्दा कलाकारले कस्ता कस्ता भूमिका स्विकार गर्छन्, यो सबैलाई थाहा छ ।
श्रीदेवीको मृत्युको १३ दिनपछि छोरी जाह्नवीको डेब्यू फिल्म ‘धडक’को सुटिङ सुरु
बलिउड भेट्रान अभिनेत्री श्रीदेवीको मृत्युको १३ दिनपछि उनकी छोरी जाह्नवी कपुरले आफ्नो डेब्यू फिल्म ‘धडक’को सुटिङ सुरु गरेकी छन् ।
हर्ष, उमङ्ग, उल्लास र खुशीको बहार बोकेर हामी बिच २०७४ सालको होली अईपुगेको छ। प्रत्येक वर्ष फाल्गुण शुक्ल पूर्णीमाका दिन मनाईने यो पर्व लाई रङ्ग हरूको पर्व पनि भनिन्छ ।
उद्योग वाणिज्य संघ पाल्पाको आयोजनामा तानसेन टुँडिखेलमा शनिबार दर्शकको खचाखच उपस्थिति थियो । आईतबारसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त कलाकारहरुसँगै दर्शकहरु रमाएका थिए ।
कान्छीको रेड कार्पेटमा कसले के भने ?
भिनेत्री श्वेता खड्काद्वारा निर्मित तथा अभिनित फिल्म ‘कान्छी’ को आइतबार सेलिव्रेटी रेड कार्पेट शो आयोजना गरियो ।
हाँस्य फिल्म हुर्रेको प्रचारप्रसार तीब्र
पाली हाँस्य फिल्म हुर्रेको रिलिज मिति नजिकिएसँगै प्रचारप्रसारमा तिब्रता दिइएको छ।
अभिनेत्री स्वेता खड्का पछिल्लो समय चर्चामा छिन् । शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउने चलचित्र ‘कान्छी’को कारणले उनको चर्चा चुलिएको हो ।
‘लिलिबिली’ को शीर्ष गीत रिलिज, जसितालाई फकाउँदै प्रदीप
‘भ्यालेन्टाइन डे’ अर्थात्, प्रणय दिवस प्रेम जोडीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण दिन मानिन्छ ।
‘पसिना’ गीत रिलिज, गौरवकी ‘पार्वती’ अनु (भिडियो सहित)
हिन्दुहरूको महत्वपूर्ण पर्व महाशिवरात्रीको दिनलाई शुभ साइत मान्दै फिल्म ‘पसिना’ को पहिलो गीत रिलिज भएको छ ।
‘छाला कालो भइदिएको भए यति लोकप्रिय हुन्नथिन्’
सन् २०१६ को ग्रामी अवार्डमा बेलायती गायिका एडेल र अमेरिकी गायिका बियोन्सेबीच कडा प्रतिस्पर्धा थियो ।
‘हुर्रे’ ट्रेलर : अंकित र राजारामसँग केकीको नाटकी माया
गतेलाई प्रदर्शन मिति कन्फर्म गरिएको फिल्म ‘हुर्रे’ को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । ट्रेलरमा प्रेम, मित्रता, वियोग, धोका र कमेडी पाटोलाई देखाइएको छ ।
यतिबेला नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह विभिन्न कारणले मिडियाको लाइमलाइटमा छिन् ।
के देखेर माया लायौ’ गीतको भिडियोले चर्चा पाइरहँदा नायिका तथा गायिका सारिका घिमिरेले ‘मुखै चिसो बनायो मुलको पानीले’ गीतको भिडियो स्रोतारदर्शक माझ ल्याएकी छन् ।
यस पटकको ग्रामी अवार्ड ब्रुनो मार्स र केन्ड्रिक लमारका पक्षमा रहयो । अवार्डको ६०औं संस्करणको मुख्य विधामा यी दुईका गीतले एकपछि अर्को ट्रफी जिते ।
कार्तिक ९ गतेबाट देश भर प्रदर्सनमा आएको फिल्म ’ऐश्वर्य’ देशका विभिन्न हलहरुमा हाउसफुल चलिरहेको छ।
काठमाडौं - अभिनेत्री स्वेता खड्काले निर्माण गरेको फिल्म ‘कान्छी’ को ट्रेलर रिलिज भएको छ । फागुन ४ गते देशव्यापीरुपमा प्रदर्शनमा आउन लागेको सो फिल्मका गीतहरु यसअघि नै रिलिज भइसकेका थिए । स्वेता र दयाहाङ राईको रोमान्स रहेको फिल्मको ३ मिनेटको ट्रेलर रिलिज गरिएको छ । जसमा दयाहाङ, श्वेतासँगै अशान्त शर्मा, अनु शाह, कामेश्वर चौरासिय, निर शाहलगायतका कलाकारहरुको अभिनय देख्न सकिन्छ ।
काठमाडौं – कमेडी भूमिकामा देखिने कलाकारलाई मूख्य अभिनेता बनाउने ट्रेन्ड नेपाली चलचित्रमा चल्न थालेको छ । राजधानीमा एक कार्यक्रम बीच घोषणा गरिएको चलचित्र ‘चङ्गा’मा अभिनेता बुद्धी तामाङ मुख्य भूमिकामा रहने भएका छन् ।